Waa maxay qaybta ugu welwelka badan ee dubo-karinta banaanka?
waxaa maamula 20-04-01
Baasboorku waa mid ka mid ah siyaabaha dadku ugu jecel yihiin xafladda iyo madaddaalada. Dadku waxay ku dhisi karaan meel lagu dubo oo lagu dubo banaanka beertiisa ama ay aasaaska lagu dubo ku diyaarsadaan duurka dhexdiisa. Laakiin si loo qorsheeyo barbecue banaanka kaamil ah, waxaa jira waxyaabo badan oo ay tahay in laga fiirsado. Waa inaad hubisaa macluumaadka ku saabsan cimilada ...
Maxay yihiin faa'iidooyinka kuraasta xeebta?
Kuraas la'aantood, sidee dadku ugu raaxeysan karaan qorrax iyo xeeb? Si loo bixiyo dareen raaxo leh, naqshadda kursiga xeebta waxay ku saleysan tahay mabda'a la waafaqaya qalooca jirka bini-aadamka iyo aaladaha u gaarka ah, waxay sidoo kale carrabka ku adkeynaysaa sida wanaagsan ee qaab dhismeedka guud iyo qulqulka li ...
Maxayadoodu waa kuwa hada laga heli karo cudurka coronavirus
1. Maaskaro la taaban karo oo awood u leh inay ka hortagaan sheekada xiisaha leh ee loo yaqaan 'Coronavirus The Disposable 3 Lakabka' Wajiga Wejiga Laab-Joog ka ah: Waxay kaa caawin kartaa bixinta qayb ahaan kahortagga caabuqyada neefsashada illaa xad, laakiin kama horjoogsan karto ceeryaanta ama haweentada. Maska-Wejiga N95-ka-xaqiijiyay ee leh: Kaliya kama caawin karto bixinta ka-hortagga ...